ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်နှင့်တိုင်း(၁၄)ခုရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ခရစ်ယျာန်ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများ၏ အရေအတွက်စာရင်း၊ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on February 25, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသူ၊ ကျူးကျော်သူမရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လ၀က၀န်ကြီးတို့၏ သက်သေခံချက်များ …	ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကို လူမျိုပေါင်း (၁၃၅ )မျိုးမှာမပါအောင် လုပ်ထားလို့ →